रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लिमा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी
घर फुटबल EXTRAS क्लासिक फुटबलरहरू रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लीमा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल लीजेन्डको पूर्ण कथा प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम द्वारा सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ; 'फेनोमेनो'। हाम्रो रोनाल्डो लुइस नाजारियो डे लिमा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा लेराउँदछ।
विश्लेषण प्रसिद्धी, पारिवारिक जीवन र धेरै बन्द र उहाँलाई मा पिच थोरै ज्ञात तथ्यहरू अघि उनको जीवन कहानी समावेश छ। सुरु गरौं।
रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लीमा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रारम्भिक बचपन जीवन
रोनाल्डो लुइस नजारियो डि लीमा १ born सेप्टेम्बर १ Brazil मा ब्राजीलको रियो दि जेनेरियोमा उनका बुबा नेलिओ नाजारियो डी लीमा, स्नेर र आमा सोनिया डोस सान्टोस बराटाको जन्म भएको थियो। उहाँ दम्पतीको तेस्रो बच्चा हुनुहुन्थ्यो।
रोनाल्डो लुइस नाजारियो डि लीमा गरिब परिवारबाट आएका थिए जसले उसलाई स्कूल पठाउन संघर्ष गर्नु भएको थियो। उहाँ बढ्दो उमेरमा शैक्षिक क्षेत्र मा एक बच्चा कल्पित रूपमा मान्यता प्राप्त थियो। स्कूलमा उसको प्रगति र राम्रो प्रदर्शन ११ बर्षको उमेर सम्म चरमोत्कर्षमा पुगे जब अनपेक्षित घटनाहरू घटे।
उनका अभिभावक, नालिओ नाजिरियो डी लीमा र सानिया डोस सान्तोस बराटा ११ वर्षको हुँदा बिभिन्न तरिकामा अलग भए र उनको हेरचाह गर्ने कोही नहुँदा रोनाल्डो लुइस नाजारियो डे लिमाले स्कूल छोड्नुपर्‍यो। त्यतिखेर साना पैसा कमाउने एक मात्र तरीका भनेको सडक फुटबल प्रतियोगिताहरू खेल्नु थियो। उसले बाँच्नको लागि खोजमा फुटबलमा प्रेम फेला पारे।
रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लीमा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध र पारिवारिक जीवन
रोनाल्डो लुइस नाजारियो डी लीमाको सम्बन्ध जीवन सन् १ 1997 XNUMX in मा सार्वजनिक भयो जब उनले ब्राजिलको मोडेल र अभिनेत्रीलाई भेटे Susana Werner जसलाई उनले लोकप्रिय ब्राजिलियन टेलिभिजन सोप ओपेराबाट प्रशंसा गरे जसलाई 'मल्हकाओ' भनिन्छ।
रोनाल्डोको सम्बन्ध सुसाना वर्नरसँग।
तिनको अनुरोध तीन एपिसोडमा विशेष गरी स्वीकृत गरिएको थियो। तिनीहरू दुवै भेट्दा उनीहरूको प्रेममा परे। यसले 1999 को सुरुवात सम्म समाप्त भएको एक लामो-सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्धी संकेत पुर्यायो।
एउटा सम्बन्धको अन्त्य भनेको स्ट्राइकरको लागि अर्को सुरू गर्नु हो जसले आफूलाई हरेक महिलाको पुरुषहरूको सूचीको सूचीमा शीर्षमा फेला पार्दछ। पछि त्यो वर्ष, रोनाल्डो भूतपूर्व महिला ब्राजिलकी फुटबलर माइले डोमि D्ग्सको प्रेममा डुबे।
रोनाल्डोको Milene Domingues संग सम्बन्ध।
उनी गर्भवती हुनुभन्दा पहिले समय लागेन। उनी गर्भवती भएको देखेर रोनाल्डोले उनलाई अल्टरमा लगे। उनीहरूको अप्रिल, १ 199961999 मा विवाह भयो। अप्रिल १ XNUMX XNUMX XNUMX को XNUMXth मा माइलेले रोनाल्डोको पहिलो छोरो रोनाल्डलाई मिलानमा जन्म दिए।
रोनाल्डो र माइलिन, आफ्ना बच्चालाई स्वागत गर्दै।
तिनीहरूको विवाह years बर्ष भयो जुन पछि तिनीहरू छुट्टिए। २००4मा, रोनाल्डो ब्राजिलियन मोडल र एमटीभी स्टार डानिएला सिकारेलीसँग मगनी भए जो गर्भवती भए तर गर्भपतनको शिकार भए।
रोनाल्डो र डानिएला।
उनीहरूको सम्बन्ध सबैभन्दा छोटो थियो। यो केवल तीन महिनासम्म चल्यो कि उनीहरूको लगनशील विवाह समारोह पछि which 700,000 को लागत।
त्यही वर्ष 2005, रोनाल्डोaपितृत्व परीक्षण र उनले आफूलाई अलेक्जेंडर नामक एक केटाको पिता हुन भनेर पुष्टि गरे।
रोनाल्डो र अलेक्जान्ड्रा।
यो केटा जन्मेको रोनाल्डो र मिशेल इमेजू, ब्राजिलियन भिटामिनको बीचमा भएको थियो जसमा रोनाल्डोले पहिलोपटक टोक्योमा 2002 मा भेट्यो।
रोनाल्डो र माइकल।
स्क्यान्डल: अप्रिल 2008 मा, रोनाल्डो तीन को समावेश घोटाला मा शामिल थियो transvestite वेश्याहरु जसलाई उनले शहर मा स्थित नाइट क्लब मा भेटे रियो दि जेनेरियो। तिनीहरू कानुनी रूपमा पुरुषहरू रहेछन् भन्ने थाहा पाएपछि रोनाल्डोले उनीहरूलाई $ .०० छुट्न प्रस्ताव गरे। तीन मध्ये एक, अब मृत Andréia Albertini 600 मा मांग। पछि उनले मिडियामा यस घटनाको पर्दाफाश गरे। मारिया बिट्राइजसँग उनको विवाह कांड पछि तुरून्त रद्द गरियो। मुद्दामा धेरै स्पष्टीकरण पछि, उनीहरूको सम्बन्ध फेरि सुरु भयो। यस पटक, प्रेमले तिनीहरूलाई खान्छ।
रोनाल्डो र मारिया।
उहाँ उनको सार्वजनिक रूपमा बाहिर जानुहुन्छ र सम्पूर्ण संसारलाई थाहा छ कि त्यो अब खोजी हुनेछ।
रोनाल्डो र मारिया (उनको जीवनको प्रेम)।
XNUM Xth डिसेम्बर 24 मा, मारियो बिट्रिज एण्टीनीले रियो डे जनेरियोमा माईरो सोफियालाई पहिलो छोरी जन्माइन्।
अप्रिल 2009 मा, सारा परिवार एक नयाँ मा सारियो पेंट हाउस साओ पाओलो मा।6अप्रिल 2010 मा, मारिया बिट्रिज एण्टीनीले साओ पाउलो मा आफ्नो दोस्रो छोरी, मारिया ऐलिसलाई जन्म दिए। संयोगवश, मारिया एलिस त्यहि दिन जन्मेको थियो, वास्तव मा 10 वर्ष पछि उनको जेठा भाई रोनाल्ड जन्म भयो।
उनको चौथो बच्चाको पुष्टि पछि, रोनाल्डोले6डिसेम्बर 2010 मा बताउनुभएको छ कि उनको एक जना थियो vasectomy, "कारखाना बन्द" गर्न, आफ्ना चार बच्चाहरु पर्याप्त भएको महसुस गर्दै।
रोनाल्डो नासारियो डे लिमा र परिवार।
रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लीमा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पहिलो पुत्रसँग सम्बन्ध, रोनाल्ड।
तिनीहरू मित्रहरू हुन्। तिनीहरूको पुरुषत्वको बारेमा कुनै अनिश्चितता छैन। त्यहाँ रोनाल्डो (बुबा) र रोनाल्ड (छोरा) बीच अप्रत्याशित भावनाहरूको कुनै एर्रे छैन।
बुबा जस्तै छोरा- रोनाल्डो र रोनाल्ड।
रोनाल्ड आफ्नो पिता बाट धेरै विशेष गरी प्रदान गर्ने, पोषण र डाउरेक्ट्रीमा बसाल्छन्।
रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लीमा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सुरुवाती सुरुवात फुटबल
बरु उसले he महिनापछि फुटबलमा भाग लिएको थियो, रोनाल्डो लुइस नाजारियो डे लिमा आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा आयोजना गरिएका सबै फुटबल खेलहरूको नियमित सदस्य बन्नुभयो। उनले आफ्ना साथीहरू र छिमेकीहरूबाट पूर्ण समर्थन प्राप्त गरे जुन उनको भविष्यवाणीहरू जान्थे र चाँडै प्रगति गरेको चाहन्थे। फुटबलको यो प्रारम्भिक शुरुआत रियो दि जेनेरियोको उपनगर बेंटो रिबेइरोको सडकहरूमा शुरू भयो। यो एक स्थान पनि हो जहाँ विश्वको फुटबलको धेरै माथि उसको असाधारण वृद्धि भयो।
पढ्नुहोस् रोबर्ट कार्लोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
रोनाल्डोले मैदानमा आफ्नो क्रान्तिकारी सडक कौशल प्रदर्शन गर्न उसलाई प्रदान गरिएका सबै अवसरहरूको उपयोग गरे। उनको कडा परिश्रमको मोल फिर्ता भयो किनकि उनलाई ब्राजिलका दिग्गज जैरसिन्होले भेट्टाए जो त्यतिबेला फुटबल कोच र स्काउट थिए। आफ्नो क्षमता देखेर, जैरजिनोले तत्काल १ the बर्षको आफ्नो पुरानो क्लब क्रुजेरियोलाई सिफारिस गरे।
क्लबसँगको डेब्यू सीजनमा रोनाल्डोले games 44 खेलमा आश्चर्यजनक 44 1993 गोल दागेर एक रेकर्ड तोडे। उसको अनुहार चर्को त्वरण, शक्तिशाली शरीर सन्तुलन र एक करीबी नियन्त्रण प्लस प्रविधि सबै फुटबल पंडित र प्रशंसक wow। उनको निरन्तर प्रदर्शनले क्लबलाई १ XNUMX XNUMX in मा पहिलो ब्राजिल कप च्याम्पियनशिपमा मद्दत पुर्‍यायो। कुनै समय सबैले उसलाई 'कल गर्न थाले'नयाँ पेल ' उनको फुटबल ढाँचाको लागि धन्यवाद जसलाई पिलको जस्तो लाग्छ जब उसले 1958 मा उही उमेरमा सुरू गर्यो। १ little वर्षको टेन्डर उमेरमा रोनाल्डोले ठूलो राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नुभन्दा केही समय लाग्यो।
Moreso, उनको प्रदर्शनले उनलाई 1994 विश्व कपमा संयुक्त स्वतन्त्र टिकट प्रदान गर्यो जुन संयुक्त राज्यमा आयोजित भएको थियो। यद्यपि उनले बेंच को प्रतियोगिता को रूप मा उनको देशियहरुलाई कप जीता।
रोनाल्डोको उत्कृष्ट प्रतिभाको ब्राजिलको एक्सएनएनएक्सएक्स विश्व कप विजेता टोलीमा उनीहरूको समावेशताको कारणले चाँडै रोनाल्डोको उत्कृष्ट प्रतिभाको शब्द फैलिएको थियो, र उनले अन्ततः उत्कृष्ट पिएट डी विसेरलाई स्काउट गरे, पहिले फुटबलमा फेरि उत्कृष्ट स्काउट्स मध्ये एक गोल गरे र रोनाल्डो संगत रोमानियो।
स्थानीय स्तरमा उनको प्रदर्शनले उनलाई विश्व कप पछि पीएसवी आइन्डनभवनमा स्थानान्तरण जित्यो।
रोनाल्डोले स्वीकार्यो किनकि ब्राजिलका खेलाडीहरु हलाण्ड वा फ्रान्समा युरोपियन खेल जान्नका लागि उनीहरूको ठूलो चालमा परम्पराको रूपमा परम्परा थियो। सन् १ 1994 in मा नेदरल्याण्ड्सको पीएसभी आइन्डहोभनलाई उसको सम्झौता बेचेपछि रोनाल्डोले मैदानमा हिर्काए जुन शीर्ष यूरोपीय प्रतिस्पर्धाको विरुद्ध प्रति खेल करिब एक गोल औसत थियो।
उनले PSV आइन्डहोभनमा seasons खेलमा goals 54 गोल गरेर दुई सीजन बिताए।
रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लीमा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -यादगार वर्ष 1996
यो १ 1996 XNUMX of को ग्रीष्म wasतु हो। एक वर्ष जहाँ धेरै चीजहरू भयो। एक वर्ष माइकल जोसनले एट्लान्टा ओलम्पिकमा दोहोरो स्वर्ण जित्यो। एक वर्ष इ England्ल्यान्डले आयोजना गरेको थियो र लगभग युरोपेली च्याम्पियनशिपको फाइनलमा पुगेको थियो। एक वर्ष द स्पाइस गर्लहरू भनिने समस्याको पाँच बण्डलहरू उनीहरूले के चाहन्थे, के उनीहरू वास्तवमै चाहन्थे भन्ने कुरा बताउन छोडे। एक वर्ष हटमेल भर्खरै आविष्कार भएको थियो। एक वर्ष फ्यूजीहरूले हामीलाई गीतको साथ नरम हत्या गरे। नेल्सन मण्डेला एक वर्ष दक्षिण अफ्रिकाको प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गर्दै थिए। एक बर्ष प्रिन्स चार्ल्स र प्रिन्सेस डायनाले सम्बन्ध विच्छेद पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै थिए।
यो एक वर्ष थियो जुन रोनाल्डो लुइस नाजारियो डे लीमाको नाम थियो जुन एक घरको नाम भयो जसमा विश्वव्यापी ध्यान प्राप्त भयो। यो बर्ष बार्सिलोनाले १-बर्षे नासमझ बच्चा (रोनाल्डो लुइस नाजेरियो डे लिमा) लाई PSV आइन्डहोभेनबाट खोसेको थियो जुन रमाईलोका लागि गोल गर्न सक्थे।
यो यस समयमा भएको थियो कि सर बॉबी रोबसन र Jose Mourinho रोनाल्डोसँग बार्सिलोना प्रबन्धक र सहायक प्रबन्धकको रूपमा काम गरे।
तपाईं रोनाल्डो केवल बार्सिलोनासँग एक सिजनको लागि बसिरहनुहुन्थ्यो, तर क्लबको साथ उनको समयमा बताउने प्रभाव थियो।
रोनाल्डोले यूएईएफ कप विजेता कप र कोपा डेल रेईको क्लबको नेतृत्व गरे।
तपाईं केवल एक बार्सिलोना को बार्सिलोना संग बस रहन चाहेंगे, तर क्लब संग उनको समय मा एक प्रभाव पड रहेको थियो। उहाँले 47 खेलहरूमा 49 लक्ष्यहरू गोल गर्नुभयो र पनि सबै भन्दा कम उमेरको खेलाडी बनेको वर्षको पुरस्कारको फीफा विश्व खेलाडी, एक रेकर्ड जुन मिति खडा हुन्छ।
20 वर्षको उमेरमा, रोनाल्डोले परिष्करणको मानक प्रदर्शन गरिरहेको थियो जुन संसारले पहिले कहिल्यै देखेको छैन।
उनको शब्दहरुमा ... "म सबै रक्षाकर्ता र रक्षक को गुजरने पछि गोल गर्न प्यार गर्छन। यो मेरो विशेषता होइन, तर मेरो बानी। " - रोनाल्डो.
रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लीमा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -अन्त मिलान
पैसा वर्ष 1998 मा फुटबलमा कुराकानी गर्न थाल्नुभयो। त्यस वर्ष, बार्सिलोना अन्तर मिलान को रोनाल्डो को लागि £ 18 मिलियन को विश्व रेकर्ड बोली स्वीकार गरे।
चुनौतीबाट फर्केपछि कहिल्यै पनि, रोनाल्डो ले इटालीियन दिग्गजलाई उत्प्रेरित गरे। उनको पहिलो सिजन सिजनको स्टार प्लेयरबाट अपेक्षा भएको विश्वको कुन कुरा थियो - 34 अधिक लक्ष्यहरू पछ्याउँदै, र थप रेकर्डहरू बिग्रिएका थिए।
रोनाल्डोले पहिले फिफा विश्व खेलाडीको अग्रतालाई फर्काउन पहिलो खेलाडी बनेको छ, र पनि प्रतिष्ठित बलियो डी 'या' स्कूप गर्दै।
रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लीमा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -1998 विश्व कप फाइनल
जहाँसम्म विश्व कप फाइनलमा जान्छ, ब्राजिल र फ्रान्सको बीचमा 1998 बाहिर खेल्ने एक राम्रो लिपि हुन सकेन। ब्राजिलले 1994 मा जित्ने मुकुटको रक्षा गर्न खोजिरहेका थिए, फ्रान्सले पहिलो पटक गोल्डन ट्राफी जित्न खोजे। खेलमा पनि दुई किंवदन्तीले एक अर्कालाई देखे, जो ब्राजिलियन रडोनाडोको पराजित गर्दै जेइसेनन ज़िडेनले आफूलाई उत्कृष्ट विवादमा फसेका थिए, जसले सबैका प्रशंसकहरूलाई पराजित गर्यो।
पढ्नुहोस् आइतवार ओलिसहे बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
ब्राजिलको सुनौलो केटा यो रोनाल्डोलाई विचार गर्नुहोस्, जसले पुनरुत्थानको फ्रान्सेली विरुद्धको पक्षलाई आशा गर्न थालेको थियो खेल खेलमा केही घण्टौं घटेको थियो।
यी रिपोर्टहरूले चाँडै नयाँ कथाहरूको लागि बाटो बनायो कि स्ट्राइकर अचम्मको पेटबाट पीडित भएको थियो। थप विवादास्पद, खाद्य विषाक्तता देखि आफ्नो प्रेम जीवन मा व्यक्तिगत समस्याहरु लाई खुलासा गरियो। अन्ततः, भगोडा सत्य पनि ब्राजीलका टोलीका डाक्टर लिडोओ टोलिडो द्वारा खुलासा गरिएको थियो: राउन्डोडो अस्पतालमा आइपुगेका थिए।
उनलाई पहिलो टोलीबाट हटाइएको थियो र केवल अस्पतालमा किक-अफ भन्दा पहिले मिनेटमा नाटकीय फिर्ती बनाउन अस्पताल पुग्यो।
तथापि कथामा अर्को मोटो थियो। ब्राजिलको विश्वकपको विश्वकपलाई विश्वकप जित्ने रोनाल्डोले उनको बीमारी बन्द गर्न सकेन र स्ट्राइकरबाट तलका प्रदर्शनका लागि एक निश्चित जाइसिने जाइडेनले दुई पटक ब्राजिलमाथि एक प्रसिद्ध 3-0 लाई फ्रान्सलाई जित्ने अनुमति दिए।
"हामीले विश्व कप हरायौं तर मैले अर्को कप जितें - मेरो जीवन" - रोनाल्डो (१ 1998 XNUMX World विश्व कप फाइनलको बारेमा)।
रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लीमा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -चोटको कथा
धेरै सम्भावित फुटबल खेलाडीहरू कैरियर धम्कीको चोट भएका छन्। माइकल ओवेन, एक पल्ट जो एक पल्ट उनको बिजुली गति को लागि डर थियो, रोनाल्डो को एक नै चोट को सामना गरे र उनि एक पल्ट थियो आधे प्लेयर बनने को लागि फिर्ता नहीं आ सके। पॉल ग्यासकोग्ने, टाइगर जंगल, जो कोले, गैरी नेभिले र धेरै अन्य एथलीटहरूको क्यारियर समाप्तिको चोट भएको छ र कहिलेकाहीँ उनीहरूको सबै भन्दा उत्तम रूपमा फर्किन सकेन।
त्यहाँ एक पतली रेखा हो जुन महान देखि अलग छ, बाँकीबाट। सबै भन्दा राम्रो हुन यो निश्चित रूप देखि एक कठिन कार्य हो। कडा कडा छ? सबै भन्दा राम्रो हुन, पतन, लिखित र त्यसपछि फेरि राम्रो भएन। यो रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लीमा चोट कथा हो।
1998 विश्व कपी चोट र कमबैक- यो फ्रान्सेलीको 1998 विश्व कपमा बार्टेजसँग टक्करमा घाइते भएको थियो।
उनले पछि बर्टहेजमा आफ्नो बदला लिइन्, जसले 98 विश्व कप फाइनलमा ट्वाइड गरेको थियो र उनीहरूलाई चोट पुर्याए। म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई एक चौंरी टोपी ट्रकमा राखे जसले उनलाई पुरानो ट्राफर्ड वफादारबाट खडा भइरहेको थियो।
1999 / 2000 इन्जेरी र कमब्याक- नोभेम्बर २१ माst १ 1999 XNUMX।, रोनाल्डोले फेरि सेक्रेट ए लेसेको बिरूद्ध खेल्दा घुँडा टेन्डर टुक्रिने बित्तिकै त्रासदी फेरि सुरु भयो।
सर्जरी र5महिना पुनर्वास पछि, ब्राजीलले ल्यापियो विरुद्धको कोपा इटाली फाइनलमा उनको फिर्ती गरे, तर एकेडेमी रिज्याकको कुनै आशाले पछि दोस्रो गोल गरेपछि एकमात्र घुटने पछि झन् झटपटिएको थियो। । त्यो एक स्ट्राइकर द्वारा चलाइएको थियो।
उहाँले 2001 / 2002 सिजनको अन्त्य सम्म फेरि प्ले गर्नुहुन्न। प्रभावकारी रूपमा, उहाँले एक वर्षको लागि बाहिर हुनुभयो। उहाँ केवल सोह्र खेलहरूको लागि मात्र देखा पर्नुभयो र त्यो सिजनको लागि केवल7लक्ष्यहरू मात्र समात्नुभयो।
रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लीमा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -अन्तर मिलान मिलान युग
निको भएपछि रोनाल्डोले ब्राजिलका म्यानेजर लुइज फेलिप स्कोलारीलाई २००२ मा जापान / कोरियामा आयोजित विश्वकपको लागि आफ्नो टीममा समावेश गर्न मनाउन पर्याप्त प्रयास गरे। गति र चपलतामा आफ्नो निर्भरता प्रतिस्थापन गर्न आफ्नो खेलको पुन: विकास गरेपछि रोनाल्डो चोटपटकको पछाडि फरक खिलाडी थिए। उनले अधिक शक्ति र लक्ष्यको लागि सुधारिएको आँखामा भर पर्न। यो उनले अनुभव मार्फत हासिल गरे। उनले विनाशकारी प्रभावमा आफ्नो नयाँ शैलीको अनावरण गरे - ब्राजिललाई फेरि फाइनलमा पुर्‍याउने र जर्मनीसँग एक शोडाउन। सबै प्री-म्याच वार्ता रोनाल्डोलाई १ 2002 1998 from देखि उनका प्रेतहरूमाथि विजय हासिल गर्ने कुरामा केन्द्रित थियो - र उनीहरूले उनलाई जित्यो।
ब्राजिलले आफ्नो नयाँ शैलीलाई 2002 विश्व कपमा विनाशकारी प्रभाव पार्नको लागि जहां ब्राजिललाई अर्को विश्व कप फाइनलमा र2लक्ष्य बनाए। उनले टूर्नामेंट मा 8 लक्ष्य बनाए र एमवीपी जीता। उनले फिफा विश्वकप खेलाडी र लाउरेस पनि जितेको वर्ष वर्षको पुरस्कार पाए।
उनको प्रदर्शनले उनलाई अर्को विश्व रेकर्ड ट्राफिक शुल्क कमाएको छ, यो समय € 39 मिलियन, जस्तै रियल म्याड्रिडले उनलाई गलाक्टिकस को आफ्नो बढ्दो लाइन अपमा थपे। अक्टोबरदेखि मध्यसम्मसम्म साइडलाइट गरिएको भए तापनि, रियल म्याड्रिडका प्रशंसकहरूले रोनाल्डोलाई नायक रेजिशनको साथ स्वागत गरे - उनको नाममा च्याट गर्दै उनले उनीहरूलाई बिक्री बिक्रीका लागि रेकर्ड तोड्न र भाग लिन सकेनन्। रोनाल्डोले आफ्नो पहिलो पटक2लक्ष्यहरूको प्रशंसकलाई धन्यवाद दिए। उनी म्याड्रिडसँग ला लिगा जित्ने बाटोमा 30 लक्ष्य योगदान गर्न गए।
चोटको उत्तराधिकारको बावजूद, रोनाल्डोले 104 गोललाई 184 गोलमा म्यानेजका लागि5खेलमा XNUMX वर्षको क्लबमा XNUMX वर्षको स्कोरमा गोल गर्नेछ।
रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लीमा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पोस्ट म्याड्रिड युग (चोट संकट र वापसी)
रोनाडो 2006 मा मैड्रिड प्रबंधक मैबोइड कैपिल्लो संग एहसान देखि गिर गयो, र मैनचेस्टर यूनाइटेड देखि Ruud वैन Nistelrooy को हस्ताक्षर पछि, Bernabeu मा उनको दिन गिना भयो।
पढ्नुहोस् डेनिस Bergkamp बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
जनवरी 27th 2007 मा, रोनाल्डो € 7.5 लाख को लायक एक सौदा मा एसी मिलान को लागि हस्ताक्षर गरे।
लिङ्गोरो विरुद्ध एक लीग म्याच फेस्ट्रुन 13th 2008 मा, रोनाल्डो को एक बिरुद्ध कनीकप को लागी पीडित पछि मैदान देखि फैलिएको थियो।
यो तेस्रो पटक रोनाल्डोले चोट लागेको थियो तेस्रो थियो, र यहाँ सम्म कि मशहूर मिलानो फिटनेस लेबल पनि उनीहरूको पुन: प्राप्त गर्ने आशामा 8 खेलहरूमा 20 गोलको बावजुद सिजनको अन्तमा आफ्नो अनुबंध नवीकरण गरेन।
रोनाल्डो अनुसार, "मेरो जीवन सधैं चुनौतीहरु को एक श्रृंखला भएको छ र म मनोवैज्ञानिक तयार भएको छु, तर यो मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।" - रोनाल्डो
एक वर्ष भन्दा बढीको लागि, रोनाल्डोले सबैलाई गलत साबित गर्न र तेस्रो क्यारियर-धम्कीको चोटबाट फर्काउनु भयो। आफ्नो देशमा फर्किने कोरिन्थीहरूको लागि सुपरस्टार चिन्ह देखा पर्यो, जहाँ उनको नायकले आफ्नो अनावरणमा स्वागत गरे।
१ 13 महिनासम्म साइडलाइन्ट भए पनि रोनाल्डोले 30 55 पटकको खेलमा goals० गोल गर्न सफल भयो। २०१० को विश्वकपको लागि उनलाई फेरि ब्राजिल टोलीमा फर्काउनका लागि नयाँ कलहरू पनि भएको थियो। यो पार भएन।
रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लीमा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -अन्तिम विश्व कप व्यवस्थापन गर्दै
रोनाल्डोले एक्सएनएनएक्सएक्स विश्व कपमा खेलेका छन् तापनि उनीहरूको फिटनेस र उनको वजनमा शंकास्पद संकट बढ्दै गएको छ। उनले ग्रिड मलरको रेकर्ड तोड्न सफल भए र 2006 लक्ष्यको साथ विश्व कप शीर्ष स्कोरकर्ता बने।
उहाँले जुन यो 27th मा घाना विरुद्ध एक ट्रेडमार्क लक्ष्य संग, यो विश्वकप फाइनल टूर्नामेंट मा आफ्नो 15th लक्ष्य पकडा। ब्राजिलको क्वाटर फाइनलमा फ्रान्सले सफा गर्न जान्छ।
रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लीमा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -वजन समस्याहरु संग निपटने
रोनाल्डो, आफ्नो कैरियर पछि को पछि भाग मा धेरै वजन हासिल संग संघर्ष।
चिकित्सा परीक्षणमा उनीसँग हाइपोथायरायडिजम रहेको पत्ता लागेको छ - एक यस्तो बिमारी जसले शरीरको मेटाबोलिजमलाई असर गर्दछ।
रोनाल्डो अनुसार, “मेडिकल जाँचपछि मैले पत्ता लगाए कि म हाइपोथायरायडिजम भन्ने गुनासोबाट पीडित छु जसले तपाईको मेटाबोलिज्मलाई धीमा बनाउँछ, र यसलाई नियन्त्रण गर्न मैले केही हर्मोनहरू लिनु पर्छ जुन फुटबलमा एन्टि डोपिंग (नियम) को कारणले अनुमति दिदैन। डर लाग्छ मेरो क्यारियरको अन्त नजिकै आइसकेको छ। ”
रोनाल्डोले आफ्ना फ्यानहरूलाई आफ्नो वजन घटाउन स on्घर्ष गरिरहने वचन दिए। तपाईंले, उहाँ तिनीहरूलाई कुनै आश्वासन दिनुभएन। केहि बिन्दुमा, यो सबैलाई भयो कि सबै संघर्षहरू धेरै संघर्ष गरेपछि हरायो।
फेरि आकारमा पुग्न उहाँले कहिल्यै कडा मेहनत गर्नुभएन।
रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लीमा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -आफ्नो सेवानिवृत्तिको घोषणा
तीन बर्षको फिफा वर्षका रोनाल्डोले सोमबार फुटबलबाट अवकाश पाउने घोषणा गरे जसलाई भावनात्मक प्रेस सम्मेलन भनिन्छ जुन उनको १ 18 बर्षको क्यारियरको अन्त्य भयो। रोनाल्डो अन्ततः फेब्रुअरी २०११ मा सेवानिवृत्ति घोषणा।
रोनाल्डो अनुसार- “मेरो क्यारियर सुन्दर र रमाईलो थियो। मसँग धेरै हारहरू छन् तर असीमित विजयहरू छन्। यस्तो चीज छोड्नु धेरै गाह्रो छ जसले मलाई एकदम खुशी बनायो। मानसिक रूपमा, म जारी राख्न चाहान्छु, तर मैले हराएको छु भनेर स्वीकार्नुपर्दछ लडाई मेरो शरीरमा। "
रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लीमा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -एक अनुचित संसार (उहाँलाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो संग तुलना गर्दै)
रोनाल्डो नामको उल्लेख गर्दा हाम्रो दिमागमा पहिलो कुरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिएक्स्युमएक्स, क्रिक्सएनमक्स। लुइस नाजेरियो डे लीमा रोनाल्डो को रूप मा सामान्यतया भनिन्छ, 'मोटो रोनाल्डो', 'मोटा (बोसो) रोनाल्डो', 'मोटीई (गंदा) रोनाल्डो', 'वेर्ड कटर कट रोनाल्डो', 'अर्को रोनाल्डो'।
रोनाल्डो डे लीमा को धेरै प्रशंसकहरु वास्तव मा दिलदार महसूस गर्छन जब उनको जित को रूप मा महान यस्तो स्तर मा कम छ र उनको के प्राप्त गरेको छ को लागि सम्झना छैन, तर उनको वजन कितना वजन या उनको कपाल को लागि। यो लाइभबोगरले समय निकाल्न र एक खेलाडीको बारेमा लेख्ने निर्णय गरेको छ जुन फुटबलका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रेरणा हो।
अब हामी तपाइँलाई सोध्दछौं, के तपाईंलाई रोनाल्डो उसको वजनको लागि, वा उसको गोलको स्कोरको लागि याद छ? के उसलाई उसको केशले गरेको वा के उसले आफ्ना खुट्टाले के गर्न सक्छ उसको लागि सम्झना छ?
अर्को पटक रोनाल्डो भन्छिन्, के तपाईं पोर्चुगल विन्जिङको बारेमा सोच्नुहुन्छ जसले फिफा विश्व खेलाडी पुरस्कार जितेको छ या ब्राजिलले यो तेस्रो जित्यो ?. "यस लेख पढे पछि यसमा तल तपाइँको टिप्पणी ड्रप गर्नुहोस्"।
रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लीमा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -लाइभबगर रेजिङ्स
आफ्नो क्यारियरमा पहिले देखि नै तीन चोटि पहिले नै लिखित लेख्नु भएको छ, तपाई अहिले जान्नुहुन्छ कि उनीहरूको शङ्कास्पद गलत साबित गर्न खुशी लाग्छ। रोनाल्डोमा, हामी एक खेलाडी छ जुन आफ्नो खेल पूर्ण रूपमा पुन: विकास गर्न बाध्य भएको छ जुन तीन पटक भन्दा बढी एक्सएनएमक्सक्स महिना भन्दा बढीको संचयी कुलको लागि घटेको छ। यो हामी जुन हाम्रो बारे मा उनको रैंकिंग मा विचार गर्दछौं।
एसी मिलान फुटबल डायरी
PSV आइन्डहोभन फुटबल डायरी
सेड्रिकले बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू बढायो
Ilaix मोरिबा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
निकोलो बरेला बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
पेड्री गोन्जालेज बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
सबैभन्दा पुरानो धेरै वोट गरिएको
रोनाल्डो दा लिमा ... मेरो लागि मात्र रोनाल्डो पारा सिम्प्रे
2 वर्ष पहिले
Cr9 एक महान पैर बैल थियो। र तपाई साँच्चै यो टुक्रा ग्याजेटको लागि र हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ
त्यो धेरै शानदार। म तपाईंको कथा पढ्न सराहना गर्दछु। रोनाल्डो अझै राम्रो मान्छे उनको कथा साझा गर्नु भएकोमा धन्यवाद।
आईफोन 5C पुन: पोर्नु भएको छ
यो लेखको यस टुक्रामा सबै कुरा बताउन तपाईंको विधि वास्तवमा छिटो छ, सबै सक्षम हुनुहोस्
को सजिलै संग यसको सजग हो, धेरै धेरै धन्यवाद।
पोलिस फुटबल खेलाडीहरू
परिमार्जित मिति: नोभेम्बर 7, 2020
Nwankwo Kanu बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य